Okumbi wesikweletu ophendukayo
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Okumbi wesikweletu ophendukayo
Ikhadi lesikweletu, kukhona ngenyanga ezayo eyisamba noma izitolimende, ezifana ezikhanyisayo credit amanye izindlela zokukhokha kodwa, isitolimende futhi ezikhanyisayo ikhredithi zizithanda Isilinganiso senzalo. Njengoba liphathwe njengoba nemibi ezikhanyisayo credit, ungase ukuthi isithakazelo okusezingeni eliphezulu Isilinganiso senzalo.
ephakeme zenzalo ngaphandle ukulondoloza isikhashana
ezikhanyisayo Ikhredithi kuncike, ezifana Imali Ukubolekwa Law and Business Izinga lenzalo kokukhawulelwa Law. It liye laqiniswa ukuzithiba yi Credit Association. Kuyinto uMthetho Investment ube nesisekelo esingokomthetho. Leli lungiselelo e inani lenzalo 20% noma ngaphansi, ezikhanyisayo lesikweletu seliphelelwe senzalo isithakazelo kunqunywa ngaphakathi lo mkhawulo. 15% inani lenzalo ngokuvamile e-credit ezijikelezayo uwukuthi, isibonelo, kuyinto ukuqhathanisa okunjalo lapho okusezingeni eliphezulu isethi ukulondoloza isikhashana engaphansi kuka 200,000 yen.
Ngo loan ikhadi, ezifana yasebhange zenzalo asethwe ukuba aphansi, inani lenzalo esikweletini elandelayo 1 million yen kusuka 12.6% 14. 6%, isibe kulungiselelwa aphansi ukwedlula senzalo isithakazelo siye sasetshenziswa ezikhanyisayo credit. Kusukela inkampani credit, ezikhanyisayo credit isibe indlela ezingaba ukukhulisa imali nesithakazelo yomsebenzisi, ukuze, ezifana ithelevishini CM, iye becula lula, hhayi inkulumo-ze futhi ezihambisana izinzuzo ezinjalo wena.
ukulondoloza isikhashana kanye ezezimali umthengi, kukhona futhi ukuthi unenkinga social ngo-1990, kodwa thina sibe abantu abaningi abanale umfanekiso ongemuhle, une ngaphezulu ezikhanyisayo ukutusa zamanje senzalo isethwe okusezingeni eliphezulu.
inkomba | the ezikhanyisayo credit | zenzalo kanye nezimali zenzuzo, Kuyini izikweletu esihogweni ingozi?
ezikhanyisayo credit Kokoroeyo izinto ersatz le (ikhasi phezulu)
izitolimende, senkokhelo ngaphezulu uma ukusetshenziswa isikhathi eside. Njengoba izitolimende bazokhokhelwa ngenani izikhathi, futhi iphela izikhathi 3 Uma usunqume inkokhelo 3-time. Ngakolunye uhlangothi, kusukela credit ezikhanyisayo kuyinto ukukhokha lemali nanembuyiselo esinqunyiwe nyangazonke ukuqhubeka yezitolo ngesikhathi credit ezikhanyisayo akusho uqhubeke, kuyoba bayanda zanqwabelana kunalokho.
buyiselo lwenyanga isethwe 5000 yen, futhi ukuthenga udumo ezikhanyisayo ngu nyangazonke 20,000 yen futhi 15,000 yen umehluko uzoqhubeka zinqwabelane ngaphandle kokuba kubuyiselwe. Uma lokhu isimo uma kulandelwa kuyoba into efanayo ukuze nesikweletu kuleso 180,000 yen unyaka owodwa. Ngaphezu kwalokho, isithakazelo okusezingeni eliphezulu lenzalo ezingamaphesenti angu-15 kuleli nani niyozenezelelwa. Ngenxa yalesi sizathu, isikhathi futhi kuyobuyiselwa uqhubeke ukweneka doodling Ukuze uqhubeke izikweletu up, sizoqhubeka zizithanda. Njengoba
imali ukuzwa ukhubazeke
lula ezikhanyisayo Ikhredithi njalo nyangazonke lasebhange lemali, kukhona kungenzeka ukuwela kangakanani ngisho uma yezitolo kuthatha fixed lemali inkohliso kuphela. Ngoba ngisho ngokuningi izinkokhelo zenyanga okufanayo, kunengozi ukuthi ukusebenzisa kakhulu. Ngoba uzokhokha ngokuhlukile lokukhokha ngamunye isitolimende uma izimpahla, waphawula phakathi futhi buyiselo ukwanda nyangazonke, ungakwazi ukubhekana, ezifana kokugwema yezitolo. Ngo-credit ezikhanyisayo, is bayaqaphela ukuthi kungakhathaliseki ukuthi kukhona kwemali kakhulu okwamanje Kukhona ethile ukuthi kunzima ukuthola.
kuphela eside buyiselo is ngokuphelele ukugwema ke
buyiselo kungapheli, kodwa ngesikhathi lo mkhuba imfucuza ngabe nge, ngaphandle izikweletu kuyehla kakhulu, liyoba ukuqhubeka ukukhokha bangaphezi le eziphezulu zenzalo. Ezikhanyisayo credit ngokuqinisekile ewusizo, kodwa kuphela ukuthi lo izimali nyangazonke kudingeka ezincane, kudingeka uqaphele ukuthi uma ukhokha eziphezulu zenzalo ngu ayewukela ukukhokha imbuyiselo.
yokuthi buyiselo incane, hhayi kuphela iye ayilibalanga emva umthwalo kakhulu. Abantu abaningi awela izikweletu amaningi sibeke kukhona isimo ukuthi ezikhanyisayo credit isibe emnyango. Ake usebenzise kakhulu kahle.
Ezihlobene | ka ezikhanyisayo izinzuzo credit